Korintofo II 10 NA-TWI - Paulo yi ne ho ano - Me, Paulo a, sɛ - Bible Gateway
Korintofo II 9Korintofo II 11
Korintofo II 10 Nkwa Asem (NA-TWI)
10 Me, Paulo a, sɛ mewɔ mo nkyɛn a meyɛ mmerɛw na sɛ minni mo nkyɛn nso a me koko yɛ duru ma mo no, na mitu saa fo yi. Mesrɛ me Kristo a ɔyɛ ɔyamyefo no din mu sɛ: 2 Sɛ meba hɔ a, monnhyɛ me mma menkasakasa mo anim. Minim yiye sɛ me bo betumi ayɛ duru wɔ nnipa a wɔka se wiase adwene na yɛde di dwuma no no so. 3 Ɛyɛ nokware sɛ, yɛte wiase nanso yennyina wiasesɛm so wɔ yɛn ko mu. 4 Akode a yɛde ko no mfi wiase. Ɛyɛ Onyankopɔn akode a ano yɛ den a yebetumi de asɛe atamfo mpampin a wɔabobɔ. Yɛsɛe akyinnyehunu. 5 Yɛsɛe akwansiwde biara a etia Onyankopɔn ho nimdeɛ no. Yɛto adwene biara nnareka ma wɔtie Kristo. 6 Sɛ mo setie wie pɛyɛ na mosan yɛ asoɔden ɔkwan biara so a, yɛbɛtwe mo aso.